2PM အဖွဲ့ဝင် Junho အတွက် လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော Song Ji Hyo – Trend.com.mm
2PM အဖွဲ့ဝင် Junho အတွက် လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော Song Ji Hyo
Posted on May 10, 2019 by Noel
မေလ ၈ရက်နေ့က မင်းသမီးချောလေး Song Ji Hyo ဟာ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ 2PM အဖွဲ့ဝင် Junho ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကိုကော်ဖီကားတစ်စီး
Junho ကလည်းသူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကိုပြသတဲ့အနေဲ့ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ “အစ်မဂျီဟိုရေ ကျွန်တော်ကော်ဖီကောင်းကောင်းသောက်ခဲ့ရပါတယ်။အခု ကျွန်တော်တို့ အပိုင်း ၁၆ရိုက်ကူးနေတုန်းဆဲပါ။ဆက်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးပါဦး”ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ကော်ဖီကားရှေ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတော်တော်များများကိုတင်ခဲ့တာမြင်တွေ့ရပါတယ်။
세상에나 지효누나 너무너무 잘 마셨습니다 ㅜ ㅜ❤️우리는 16부 촬영 중입니다. 마지막까지 기다려 주세요!
A post shared by 이준호 (@le2jh) on May 8, 2019 at 2:08am PDT
Junho ဟာ အခုလက်ရှိမှာ “Confession” ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။Song Ji Hyo က ကော်ဖီကားလက်ဆောင်ပုိ့ပေးခဲ့ပြီး Confession ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေရော၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရောကော်ဖီသောက်ပြီးအားတင်းထားကြဖို့ ချစ်စရာစာလေးရေးသားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
Song Ji Hyo ကတော့ ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ Lovely Horribly ဇာတ်လမ်းတွဲကိုမင်းသား Park Si Hoo နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီး အခုလတ်တလောမှာတော့
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လက်ခံထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကလည်း Song Ji Hyo ဟာ မင်းသား Hong Jong Hyun အတွက် ကော်ဖီကားလက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကြည့်ရဖို့ သိပ်မလိုတော့တဲ့ IT Chapter Two (2019) trailer ထွက်ရှိ